Ny Fanagasiana d'Emilson Daniel Andriamalala (1918 - 1979) - blog de la lecture à l'amour, de l'amour à la lecture
Ny Fanagasiana d'Emilson Daniel Andriamalala (1918 - 1979)
" Andian-javatra roa lehibe no maha-firenena ny firenena. " (p. 3)
Emilson Daniel Andriamalala dia isan'ireo mpanoratra malagasy namoaka hevitra sy nanohana izany hatramin'ny farany mba hisy vokany ho an'ireo mpiray tanindrazaha aminy izay nosoratany. Nanatanteraka famelaberana manerana ny toerana sy faritra maro i Emilson Daniel Andriamalala.
Ny fanagasiana, nosoratana tamin'ny taona 1974, nandritra ny fotoana nidiran'ny Madagasikara tao anatin'ny fikarohana làlana nivoahana ny fanjanahan-tany tamin'ny endriny rehetra. Nametrahana ny fomba fitondrana nanjakan'ny vahoaka. Kanefa toa tsy nahitana vokatra nahomby izay natao !
Nisy ny fampidirana ny teny malagasy ho hany tokana fampiasa eo amin'ny lafiny maro sy ny amin'ny fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka : teo indrindra no nitranga ny ankamehana maro manodidina ny fanomanana sy ny fampiharana ny fanagasiana.
Tsapa ihany koa anefa fa nisy ny ezaka nentina nanatanterahina sy nampahombiazana ny fanagasiana tamin'ny lafiny maro. Nefa toa nisy foana ny tsirambina sy ny tandrevaka teny anivon'ny fandraharahana sasany.
" Satria ireo lehibebe ... tsy nisaina izay hampisondrotra ny mpiray foko aminy, fa ny niray petsapetsa tamin'ny vahiny mpangoron-karena. " (p. 22)
Nasehon'i Emilson Daniel Andriamalala tamin'ny lafiny telo : fampianarana, toekarena ary toetsaina sy fomba fisainana, izay hevitra rehetra nifanohitra sy nifameno nanodidina ny fanagasiana. Navoitran'ny mpanoratra hatrany hatrany sy tsy tampihambahambana ny hevitra notohanany rehetra.
Ary mbola mitohy mandrak'ankehitriny ny adi-hevitra manodidina ny fanagasiana.
" Na afaka folo taona , na roapolo taona isika vao hampihatra ny fanagasiana, dia ireo olana misy amin'izao fotoana izao ireo ihany no tsy maintsy hovantsika. Koa hadalana fotsiny ny hampiato na hampangingina ny fanagasiana, satria " tsy faly ny antokon'olona sasany. "
Nosoratan'i Emilson Daniel Andriamalala sy navoitrany tao anatin'ny boky Ny Fanagasiana fa miankina amin'ny tsirairay ihany no fahafahana miala amin'ny olana mitranga ka mampanantona ny fivoarana.
" Hadinontsika fa ny tena votoatin'ny atao hoe : " Fandrosoana ", dia fihezahana hihataka amin'ny maha-biby mba hanakatra fiainana sy fiaraha-monia ambonimbony sy mahafinaritra kokoa. " (p. 45)
Maro ny resaka efa nandeha ary tsy vitsy ny tahirin-kevitra nivoaka niresahana ny momba ny fangasiana taorinan'ny fanjanahan-tany nihatra tamin'ny firenena malagasy (naharitra 60 taona). Nahoana izay fotoana izay no nahatonga sy nitarika fiovana maro teto amin'ny firenena rehefa niverina ny fiandrianana ? Kanefa efa nanana fanjakana sy ny fifandraisana tamin'ireo firenena hafa maro i Madagasikara ?
" Tokony ho nohidiana mihintsy ny varavarana rehetra tsy hahafahan'ny entana avy any ivelany miditra aloha mandritra ny fotoana voafetra, hahitana izay mety hovita eto an-toerana sy ny tsy mety hovita. Hipoipoitra ho azy ny manan-talenta malagasy amin'ny taozavatra. " (p. 39)
Nanome sy nanolotra vaha-olana tamin'ireo lafiny telo noresahina i Emilson Daniel Andriamalala.
" Mifantoka eny amin'ny manam-pahaizana vokatry ny taniny ny mason'ny Malagasy tsivakivolo ... Angamba aza tsy ny mason'ny Malagasy ihany, fa ny mason'izao tontolo izao koa. " (p. 59)
Vakivakim-piainana de Patrick Andriamangatiana Madagascar, le coup d'Etat de mars 2009
nasoavina 19/01/2017 08:49
slm dhl!iz av angah n mpandray anjar ao @ bok fanagasiana!!d m
mythie 12/01/2017 20:28
woaou tena marina
mythie 12/01/2017 20:27
hadji 20/01/2017 08:28
famitinana ny boky fanagasiana
kasaina 04/11/2016 20:47
Mahafinaritra ny mamaky ilay boky Ny fanagasiana.Ar ten marna n voalaz ao.
ANISSA'H 11/06/2016 20:26
inun ny tara-kevitra ny fanagasiana ?mb valio azafady, :)